Eden Hazard Vs Thorgan Hazard-Walaalahan Oo Wacdaro Dhigaya Iyo Eden Hazard Oo Laga Yaabsaday - Wargane News
Home Sports Eden Hazard Vs Thorgan Hazard-Walaalahan Oo Wacdaro Dhigaya Iyo Eden Hazard Oo...
Chelsea ayaa mar kooxdeeda ku wada haysatay wiilasha walaaha ah ee Eden Hazard oo haddaba kooxdeeda ka tirsan iyo Thorgan Hazard oo markii uu Chelsea boos ka waayay iskaga baxay kaas oo waqti xaadirkan si buuxda ula tartamaya walaalkiisa wayn ee Eden Hazard.
Thorgan Hazard ayaa sida Eden Hazard oo kale waxa uu xili ciyaareedkan noqday mid aan la joojin karin wuxuuna si toos ah ula tartami karaa gool dhalinta iyo gool caawinta walaalkiisa wayn ee Eden Hazard oo isna xaaladiisii ugu fiicnayd ku jira inkasta oo uu dhaawac soo gaadhay waqti la maqnaa.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa isbarbar dhiga Eden Hazard iyo walaalkiisa ka yar ee Thorgan Hazard waana xog cajiib ah oo muujinaysa in Eden Hazard la soo qabanayo isla markaana uu qoysku hadda yeelanayo laba xidig oo isku awood noqon kara.
Thorgan Hazard waxa uu wacdaro ka dhigayaa kooxdiisa Borussia Mönchengladbach ee horyaalka Germany wuxuuna hadda si buuxda iskugu dherarin karaa wax qabadka Eden Hazard ee kooxda Chelsea adiga ayaan markhaati ka noqon kara marka aad xogta hoose akhrisato.
Aan ku bilawnee Eden Hazard ayaa xili ciyaareedkan kooxdiisa Chesea u soo dhaliyay 9 gool oo 7 ka mid ahi horyaalka Premier league yihiin laakiin waxaa la dhaafay walaalkiisa Thorgan Hazard oo ilaa hadda kooxdiisa Borussia Mönchengladbach u soo dhaliyay 10 gool.
Laakiin walaalaha qoyska reer Hazard ayaa barbaro ku aha gool caawinta xili ciyaareedkan waxayna wada leeyihiin min 4 gool caawin oo ay sameeyeen taas oo la micno ah in Eden Hazard uu ku soo lug lahaa 13 gool oo ay Chelsea soo dhalisay halka Thorgan Hazard uu ka soo qayb qaatay 14 gool oo ay kooxda Borussia Mönchengladbach xili ciyaareedkan soo dhalisay.
Waliba si xaqiiqda xogtan aad u fahmi karto waa in aad ogaato in labada xidigba ay ciyaareen min 14 kulan waana sababta uu Eden Hazard ugu han waynaan karo in walaalkiisa yar ee Thorgan uu hal gool ka sare maray markii ay min 14 kulan soo ciyaareen.
Laakiin sheekada cajiibka ahi waxay tahay in Eden Hazard iyo Thorgan Hazard ay kooxahooda ka caawiyeen in ay kaalmaha labaad ee Premier league iyo Bundesliga ah ka caawiyeen iyada oo Thorgan uu laba gool dhalyay si ay Borussia Mönchengladbach kaalinta labaad ee Bundesliga u gasho halka Hazard uu hal gool caawin u sameeyay Chelsea si ay kaalinta labaad ee Premier leage u gasho.
Halkan kaga bogo Xogta Eden Hazard Vs Thorgan Hazard ee Min xili ciyaareedkii hore iyo ilaa xili ciyaareedkan inta la soo ciyaaray oo isbarbar taala:
Somaliland: Wasiirka Madaxtooyadda Oo Qarxiyay Sir Qarsoonayd, Sheegayna In Heshiisyada Imaaraatka Ay Wada Saxeexeen M/Siilaanyo Iyo Xasan Sheekh Maxamuud